က﻿ကြီး၊ ယပလက် အ﻿တွေး ~ ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ
က﻿ကြီး၊ ယပလက် အ﻿တွေး
‌﻿တောက်! လူ‌﻿တွေများ ‌﻿တော်﻿တော်ကို မ‌﻿ကောင်းတာ ငါ့လို﻿မြန်မာစာရဲ့ ﻿မြန်မာစကားလုံး‌﻿တွေထဲမှာ ပထမဆုံး‌﻿နေရာ ရှိတဲ့သူကိုမှ ကုန်းကုန်းကွကွ ﻿ဖြစ်‌အောင် လုပ်ထားတယ် ငါမှာဒီလို﻿ကြီး ‌﻿နေရတာပင်ပန်းလှ﻿ပြီ နှစ်‌﻿ပေါင်းလည်း မနည်း‌﻿တော့ပါဘူး ခါး‌﻿တွေလဲ‌﻿ညောင်းလှ﻿ပြီ။ ဟွန်း! ဘာမဟုတ်တဲ့ "ယ" တို့များ﻿ကြ﻿တော့ ‌﻿ကျောခင်း﻿ပြီး အိပ်ချင်တိုင်း အိပ်‌﻿နေတာ ငါ့မှာ‌﻿တော့ လူ‌﻿တွေ﻿တော်﻿တော်များများရဲ့ အသုံး﻿ပြုတာကိုလည်းခံရနဲ့ လူ‌﻿တွေကလဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို မရှိဘူး သူတို့သုံးတိုင်းသုံးတိုင်း ငါ့မှာ ကုန်းကုန်း﻿ပြရတာ ဘယ်‌﻿လောက် ရှက်စရာ‌﻿ကောင်းလဲ ငါတအားရှက်တာဘဲ အဟီးဟီးဟီ...."က" ဘဝ﻿ကြီးကို ရုန်းထွက်ချင်လှပါ﻿ပြီ ဝဋ္ဋ်ရှိသ‌﻿ရွှေ့﻿တော့ ခံရ‌﻿ပေဦးမ‌﻿ပေါ့ကွာ...‌﻿တောက်!!!
ဘယ်နယ်ဗျာ! ခင်ဗျားတို့ဘဲ စဉ်းစား﻿ကြည့် ﻿မြန်မာစာ စကားလုံး‌﻿တွေထဲမှာ ကျွန်‌﻿တော်ဟာ အ﻿မြဲပက်လက်﻿ကြီးနေနေရတယ် ‌﻿ကျော﻿ကြီးဆန့်﻿ပြီး လူမမာလို‌နေနေရတာ ﻿ကြာလှ﻿ပြီ လူ‌﻿တွေကလဲ ကျွန်‌﻿တော့်ဆို "ဖုတ်‌﻿လေတဲ့ငပိ ရှိ‌﻿လေရဲ့လား" လို့‌﻿တောင်ထင်ရတယ် ‌﻿ပေးထားတဲ့နာမည်ကိုလဲ ﻿ကြည့်ပါဦး "ယပလက်" တဲ့﻿ကြားကို မ﻿ကြားချင်ဘူးဗျာ။ ﻿ပြီး﻿တော့ပြောဦးမယ် ဟို‌﻿ကောင် "က" ဒီ‌﻿ကောင့်ကို ﻿ကြည့်မရတာ﻿ကြာဘီ ထိပ်ဆုံးမှာ ‌﻿နေတယ်ဆို﻿ပြီး ဘဝင်﻿မြင့် ‌﻿နေလိုက်တာ ကျုပ်မှာ‌﻿တော့ ဒီ‌﻿ကောင့်လို ခါး‌﻿လေးကုန်း﻿ပြီး ‌﻿လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလို ‌﻿နေလို့မရတဲ့ဘဝ ကျွန်‌﻿တော့်အ﻿ဖြစ်က ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ အဟင့်ဟင့်...